Sɛnea Onyankopɔn Bu Mmea—Ɛyɛ Ampa sɛ Odwen Wɔn Ho?
“Ɔbea na ɔkɔfaa bɔne bae, na n’adaworoma na yɛn nyinaa rewuwu yi.”​—ECCLESIASTICUS, WƆKYERƐW NO BƐYƐ MFE 200 ANSA NA YESU REBA.
“Moyɛ Ɔbonsam adwumayɛfo: mo na motew aduaba a wɔabara no ano: mo na mudii kan tew Onyankopɔn mmara so atua . . . Mo na mode da koro pɛ sɛee ɔbarima a Onyankopɔn bɔɔ no ne suban so no.”​—TERTULLIAN, ON THE APPAREL OF WOMEN, WƆKYERƐW NO BƐYƐ MFE 1,800 NI.
SAA nsɛm a wɔkyerɛw no tete mmere mu yi mfi Bible mu. Wɔagyina so ayɛ nyiyim atia mmea mfe pii ni. Ɛnnɛ mpo, nnipa a wɔagye asɛm no agyina mu de nyamesom mu nsɛm bi kyerɛ sɛ wobetumi ahyɛ mmea so, na wɔka sɛ mmea na akɔfa adesamma amanehunu aba. Na ɛyɛ Onyankopɔn pɛ sɛ mmarima bebu mmea animtiaa na wɔayɛ wɔn basabasa anaa? Dɛn na Bible ka wɔ ho? Ma yɛnhwɛ.
Onyankopɔn adome mmea anaa?
Dabi. Mmom “ɔwɔ dedaw no, nea wɔfrɛ no Ɔbonsam” no, ɔno na Onyankopɔn ‘adome’ no. (Adiyisɛm 12:9; Genesis 3:14) Bere a Onyankopɔn kae sɛ Adam ‘bedi’ ne yere so no, na ɛnkyerɛ sɛ Onyankopɔn apene so sɛ ɔbarima nni ɔbea so. (Genesis 3:16) Nea na ɔreka akyerɛ Adam ne Hawa ara ne sɛ bɔne a wɔyɛe no ho nsunsuanso bɛba wɔn so akyiri yi.
Enti basabasa a wɔde yɛ mmea no mfi Onyankopɔn, na mmom ɛyɛ bɔne a ɛwɔ nnipa ho na akɔfa aba. Bible mma kwan sɛ mmarima nhyɛ mmea so mfa mpata bɔne a onipa dii kan yɛe no.—Romafo 5:12.
Ɔbarima kyɛn ɔbea wɔ Onyankopɔn ani so anaa?
Dabi. Genesis 1:27 ka sɛ: “Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so, Onyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no; ɔbarima ne ɔbea na ɔbɔɔ wɔn.” Enti efi mfiase pɛɛ no, Onyankopɔn bɔɔ mmea ne mmarima nyinaa sɛ wobetumi ada Onyankopɔn suban adi. Ɛwom, ɛsono sɛnea wɔbɔɔ Adam, ɛnna ɛsono sɛnea wɔbɔɔ Hawa. Ɛsono sɛnea wɔn mu biara nso te nka wɔ nneɛma ho, nanso wɔmaa wɔn nyinaa adwuma koro, na na obiara nkyɛn ne yɔnko wɔ Ɔbɔadeɛ no anim.—Genesis 1:28-31.
Ansa na Onyankopɔn rebɔ Hawa no, ɔkae sɛ: “Merebɛyɛ ɔboafo ama [Adam], ɔhokafo a ɔfata no.” (Genesis 2:18) Asɛm “ɔhokafo” no kyerɛ sɛ ɔbarima no kyɛn ɔbea no anaa? Dabi, efisɛ Hebri mu no, wotumi kyerɛ saa asɛmfua no ase “ɔyɔnko” anaa “ɔboafo a ɔte sɛ ɔno ara.” Dɔkota a ɔyɛ oprehyɛn ne nea ɔhwɛ onipa a wɔreyɛ no oprehyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrente yaw no, hwɛ sɛnea obiara boa ne yɔnko. Obiako nni hɔ a, obiako no betumi ayɛ n’adwuma anaa? Dabida! Biako na ɔyɛ oprehyɛn no, nanso yebetumi aka sɛ ne ho hia sen ne yɔnko no anaa? Yɛrentumi nka saa. Saa ara na Onyankopɔn bɔɔ ɔbarima ne ɔbea sɛ wɔnyɛ adwuma mmom, na ɛnyɛ sɛ wɔne wɔn ho nsi akan.—Genesis 2:24.
Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn dwen mmea ho?
Onyankopɔn hui sɛ sɛnea bɔne wɔ nnipa ho nti, mmarima betumi ayɛ mmea basabasa, enti ɔhyɛɛ mmara a ɛbɛbɔ mmea ho ban. Wɔde Mose Mmara no sii hɔ bɛyɛ mfe 1,500 ansa na Yesu reba, na nhoma kyerɛwfo Laure Aynard kae wɔ ne nhoma bi mu sɛ: “Nsɛm a ɛwɔ Mmara apam no mu a ɛfa mmea ho no, dodow no ara yɛ nea ɛbɔ wɔn ho ban.”—La Bible au féminin (Bible a Ɛwɔ Mmea Kabea Mu).
Ɛho nhwɛso ne sɛ, Mmara no hyɛe sɛ obiara mfa obu ne nidi mma ne papa ne ne maame. (Exodus 20:12; 21:15, 17) Ɛsan hyɛe sɛ wonnya tema mma apemfo. (Exodus 21:22) Ahobammɔ a wɔde maa mmea wɔ Onyankopɔn mmara no mu no, ɛyɛ soronko koraa wɔ hokwan a ɛnnɛ wɔde kame mmea bi wɔ aman pii so no ho. Ɛnyɛ eyi nkutoo na ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn dwen mmea ho.
Mmara a Ɛma Yehu Sɛnea Onyankopɔn Bu Mmea
Mmara a Yehowa Nyankopɔn de maa Israel man no maa mmarima ne mmea nyinaa nyaa apɔwmuden ne suban pa, na ɛma wɔbɛn Onyankopɔn. Bere a ɔman no tiee Onyankopɔn dii ne mmara so no, ɔmaa wɔn so sen “asase so aman nyinaa.” (Deuteronomium 28:1, 2) Gyinabea bɛn na Mmara no de maa mmea? Ma yɛnhwɛ nea edidi so yi.
1. Fahodi. Tete no, na Israelfo mmea wɔ fahodi pii sen aman a aka mu mmea. Ɛwom sɛ wɔde tiyɛ maa ɔbarima wɔ abusua no mu de, nanso na okunu no tumi nya ne yere mu awerɛhyem gyaw ma no ma “odwen asase bi ho, na ne nsa ka” a, otumi de “yɛ bobeturo.” Sɛ onim asaawatow ne ntama nwene a, na ɔno ankasa tumi bue n’adwuma. (Mmebusɛm 31:11, 16-19) Mose Mmara no buu mmea sɛ wɔyɛ nnipa a wotumi yɛ nea wɔpɛ, na ɛnyɛ sɛ wɔbɔɔ wɔn bataa mmarima ho kɛkɛ.
Tete Israel no, na mmea wɔ hokwan sɛ wɔsom Onyankopɔn. Bible ka Hanah ho asɛm sɛ ɔbɔɔ mpae kaa n’ahiasɛm bi kyerɛɛ Onyankopɔn na ɔhyɛɛ bɔ wɔ ne komam. (1 Samuel 1:11, 24-28) Ná Sunemni bea bi taa kohu odiyifo Elisa Homeda Homeda. (2 Ahene 4:22-25) Onyankopɔn maa mmea bi te sɛ Debora ne Hulda yɛɛ n’ananmusifo. Nea ɛyɛ anika ne sɛ mmarima anuonyamfo ne asɔfo kɔɔ wɔn nkyɛn kogyee afotu.—Atemmufo 4:4-8; 2 Ahene 22:14-16, 20.
2. Adesua. Esiane sɛ na mmea ka Mmara apam no ho nti, sɛ wɔrekenkan Mmara no a, na wɔto nsa frɛ wɔn ma wokotie bi, na ɛma wonyaa hokwan a wɔde besua ade. (Deuteronomium 31:12; Nehemia 8:2, 8) Wonyaa ntetee a ɛbɛma wɔatumi anya ɔman no som dwumadi bi mu kyɛfa. Ɛho nhwɛso bi ne sɛ mmea bi ‘som’ wɔ ahyiae ntamadan no ano, na na ebinom nso ka nnwontofo kuw no ho.—Exodus 38:8; 1 Beresosɛm 25:5, 6.
Ná tete Israelfo mmea tumi yɛ adwuma nya sika
Ná mmea pii wɔ nimdeɛ a ɛma wɔn ankasa tumi hyehyɛ adwuma. (Mmebusɛm 31:24) Saa bere no, na agyanom nkutoo na wotumi kyerɛkyerɛ wɔn mma mmarima wɔ aman foforo mu, nanso Israelfo de, na ɛna no nso boa kyerɛkyerɛ wɔn mma mmarima kosi sɛ wobenyin. (Mmebusɛm 31:1) Enti yetumi hu sɛ na tete Israel mmea wɔ nimdeɛ pii.
3. Nidi ne obu. Mmara Nsɛm Du no ka no pefee sɛ: “Di wo papa ne wo maame ni.” (Exodus 20:12) Mmebusɛm a Ɔhene Solomon nyansafo no kyerɛw no, ɔkae wom sɛ: “Me ba, tie wo papa nteɛso, na mpo wo maame mmara.”—Mmebusɛm 1:8.
Mmara no kaa nsɛm pii faa ɔbea ne ɔbarima a wɔnyɛ awarefo abrabɔ ho, na ɛkyerɛe sɛ ɛsɛ sɛ obiara nya obu ma mmea. (Leviticus 18:6, 9; Deuteronomium 22:25, 26) Ɛkyerɛe nso sɛ ɛsɛ sɛ okunu pa dwen ne yere ho na ɔkae sɛ ɛsono sɛnea wɔbɔɔ ɔbea.—Leviticus 18:19.
4. Ahobammɔ. Yehowa ka ne ho asɛm wɔ Bible mu sɛ ɔyɛ “nnyanka agya ne akunafo temmufo.” Ɔkwan bi so no, wɔn a wonni papa anaa kunu no, ɔno na na otwitwa gye wɔn. (Dwom 68:5; Deuteronomium 10:17, 18) Enti bere bi a odiyifo bi yere kɔdee obi ka a onipa no bae sɛ ɔrebɛfa no akɔ no, Yehowa de ne ho gyee mu yɛɛ anwonwade sɛnea ɛbɛyɛ a okunafo no anim rengu ase.—2 Ahene 4:1-7.
Israelfo reyɛ adu Bɔhyɛ Asase no so no, abusuapanyin Selofehad wui nanso na onni ɔbabarima, enti ne mmabea baanum no ka kyerɛɛ Mose sɛ ɔmma wɔn “agyapade” wɔ Bɔhyɛ Asase no so. Yehowa yɛ boroo nea wobisae no. Ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ma wɔn agyapade wɔ wɔn papa nuanom mu. Ma wɔn papa agyapade mmedi wɔn nsam.” Efi saa bere no, ɛbɛyɛɛ mmara sɛ Israelfo mmea betumi anya agyapade afi wɔn papa hɔ na wɔn nso wɔde agya wɔn mma.—Numeri 27:1-8.
Ebinom Kyerɛ sɛ Onyankopɔn Nnwen Mmea Ho
Mose Mmara no mu no, na mmea wɔ nidi na na wobu wɔn nso. Nanso bɛyɛ mfe apem akyi no, Helafo amammerɛ bɛfrafraa Yudasom mu, na wobenyaa adwene sɛ mmea ho nhia papa.—Hwɛ adaka a wɔato din “Tete Nhoma Akyerɛwfo Bi Kasa Tiaa Mmea” no.
Sɛ nhwɛso no, Hela anwensɛm kyerɛwfo (a ɔtenaa ase bɛboro mfe 700 ansa na Yesu reba) Hesiod kae sɛ adesamma anyɛ yiye nyinaa fi mmea. Ɔkae wɔ ne nhoma bi mu sɛ “mmea [yɛ] abusuyɛfo a wɔte nnipa mma mu reteetee wɔn.” (Theogony) Bɛyɛ mfe ahanum akyi no, nkurɔfo pii soo saa asɛm yi mu wɔ Yudasom mu. Talmud a wofii ase kyerɛw no wɔ asomafo no akyi no, de kɔkɔbɔ yi maa mmarima sɛ: “Wo ne mmea nnkasa nnkyɛ efisɛ ɛde wo bɛkɔ ɔbrasɛe mu.”
Mfe pii ni na saa adwemmɔne no aka sɛnea Yudafo hu mmea. Eduu Yesu bere so no, na wɔmma mmea kwan mma wɔnkɔ asɔrefie hɔ gye Mmea Abangua no so. Mmarima nkutoo na na wɔkyerɛkyerɛ wɔn nyamesom ho nsɛm, na na ebetumi aba sɛ wɔmma mmea ne mmarima ntena faako wɔ asɔrefie hɔ. Talmud no faa Rabi bi asɛm kae sɛ: “Sɛ obi kyerɛkyerɛ ne babea Torah [Mmara no] a, na ɔrekyerɛkyerɛ no adapaade.” Yudasom mu mpanyimfo no kyerɛe sɛ Onyankopɔn nnwen mmea ho, enti wɔkyerɛkyerɛɛ mmarima pii sɛ wommu mmea animtiaa.
Yesu wɔ asase so no, ohui sɛ saa adwemmɔne no agye ntini wɔ Yudafo no mu. (Mateo 15:6, 9; 26:7-11) Saa nkyerɛkyerɛ no kaa sɛnea ɔne mmea dii no anaa? Dɛn na yebetumi asua afi Yesu suban ne ne nneyɛe mu? So Kristosom de ahotɔ abrɛ mmea? Asɛm a edi hɔ no bɛma nsɛmmisa yi mmuae.
Tete Nhoma Akyerɛwfo Bi Kasa Tiaa Mmea
Efi asomafo no bere so reba no, nhoma akyerɛwfo bi te sɛ Philo a ofi Aleksandria fii ase de Helafo nyansapɛ kyerɛkyerɛɛ Genesis asɛm no mu. Philo de, ɔkyerɛ sɛ Hawa bɔɔ aguaman, na ɛno nti wɔabu no fɔ koraa, kyerɛ sɛ, “wɔagye n’ahofadi nyinaa afi ne nsam, na wɔde no ahyɛ ɔbarima a ɔyɛ ne hokafo no ase sɛ onni ne so.” Mmea animtiaabu no wuraa Yudasom ne Tete Asɔre Agyanom nhoma a wɔkyerɛwee mu.
Rabi bi kyerɛɛ nea enti a ɛsɛ sɛ mmea de ade kata wɔn ti. Ɔkae wɔ Yudafo nhoma bi a wɔkyerɛw no Yesu akyi bɛyɛ mfe ɔha mu sɛ: “Ɔbea te sɛ obi a wayɛ bɔne a ɛno nti n’ani awu nnipa anim.” (Midrash Rabba) Yesu akyi no, ankyɛ pii na nkurɔfo pii gyee nyamekyerɛfo Tertullian nhoma ahorow toom; nsɛm a ɔkekae no bi ne sɛ ɛsɛ sɛ mmea yɛ wɔn ho te sɛ “Hawa a wanu ne ho wɔ ne bɔne ho na ɔredi awerɛhow.” Wɔtaa di mfomso bu saa nkyerɛkyerɛ yi sɛ efi Bible mu, na ɛka ho bi na nnipa pii yɛ nyiyim tia mmea no.
Sɛnea Yesu yɛɛ mmea no, dɛn na yebetumi asua afi mu?
Nnipa bi asetenam nsɛm kyerɛ sɛ Bible reboa nkurɔfo ama wɔadi ɔtan hunu so. Bere bɛn na ase betu koraa?